JohnSmith – Page 14 – Shwe Pyi Aye
အိမ်နီချင်းကောင်း မပီသတဲ့ သာကောကြီး ဝင်ဝင်မွှေနေချိန်မှာ လက်ရှိ မိတ်ဆွေကောင်း ပီသတဲ့ ဂြ ပန်ကတော့ သင့်မြတ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနေလေရဲ့
By JohnSmithPosted on November 29, 2020 November 29, 2020
အိမ်နီချင်းကောင်း မပီသတဲ့ သာကောကြီး ဝင်ဝင်မွှေနေချိန်မှာ လက်ရှိ မိတ်ဆွေကောင်း ပီသတဲ့ ဂြ ပန်ကတော့ သင့်မြတ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနေလေရဲ့ ဂြ ပန်အစိုးရရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ တွေ့ဆုံ
ဂြ ပန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ယိုဟီ ဆာဆာကာဝါ နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီးတို့အဖွဲ့ဟာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုဝင်ဘာ ၂၈ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အဖွဲ့တို့ဟာ မနက်ပိုင်း ၈ နာရီခွဲမှာ စစ်တွေမြို့ကို လေကြောင်းကနေတစ်ဆင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီး လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့သွားရောက် လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ညနေပိုင်းမှာတော့ ဒေသခံသတင်းသမားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုလာရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်မှာတော့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းက စစ်ပွဲရပ်စဲရေးကိစ္စအပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုပါ ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ CRD_ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း
တန်ဖိုးများတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့အတူ မြန်မာဝမ်းဆက်၊ ဆန်အိတ်များစွာကို ပံ့သကူအလှူအဖြစ် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေး
By JohnSmithPosted on November 29, 2020
တန်ဖိုးများတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့အတူ မြန်မာဝမ်းဆက်၊ ဆန်အိတ်များစွာကို ပံ့သကူအလှူအဖြစ် လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေး ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေးကတော့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညမှာ အလှူပြုရတဲ့ ပံ့သကူပစ်တဲ့အလှူလေးမှာ ပါဝင်လိုက်ပြန်ပါပြီ ။ အနုပညာလောကရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေးက ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ အားတက်သရော ပါဝင်လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသူဖြစ်ပြီး စိတ်သဘောထားဖြူစင်တဲ့ သူလေးပါ။ သူမရဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ အပြောအဆိုလေးတွေကြောင့် အများက အချစ်ပိုကာ အားပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အနုပညာကြိုးစားမှုတွေကလည်း အံ့မခန်းဖြစ်ပြီး ဝေဖန်သံတွေကိုလည်း အောင်မြင်မှုတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သူလို့ အများက ချီးကျူးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း ဖြူဖြူထွေးက အနုပညာလှုပ်ရှားမှု အားလပ်ချိန်တွေမှာ ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး ယနေ့ည ပံ့သကူအလှူအတွက်ကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင်ပေးနေတာပါ။ ဒါကတော့ သောင်းတန်ပိုက်ဆံတွေနဲ့အတူ မြန်မာဝတ်စုံ ၊ ဆန်အိတ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ထုပ်ပိုးကာ လုပ်အားပေးနေခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ဝေမျှလာတာပါ။ ပုံလေးတွေအပြင် ” ဒီနေ့ည ဖြူဖြူပံ့သကူပစ်ပါ့မယ် ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ (၁၀)သိန်း ရယ် မြန်မာ့ဝမ်းဆက်ရယ် ဆန်ရယ် ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုလည်း ရေးသားထားတာဖြစ်လို့ ချစ်ပရိသတ်တွေ သိရှိစေရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်….. ။ Photo credit – Phyu Phyu Htwe’s Facebook Account
Source & Photo credit – Phyu Phyu Htwe’s Facebook Account
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရေးမှူးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အနူးအညွတ် ပြန်လည်တောင်းပန်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရေးမှူးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အနူးအညွတ် ပြန်လည်တောင်းပန်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး အွန်လိုင်းဆယ်လီတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ နောက်ပိုင်းမှာ အွန်လိုင်းကြော်ငြာလေးတွေကို ရိုက်ကူးလာခဲ့ပြီး အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ကိုင်လာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလည်း ဖြူဖြူထွေးက ဒါရိုက်တာ စတီးလ်ရိုက်ကူးတဲ့ ကြော်ငြာတစ်ခုမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့ရာ ထိုကြော်ငြာထဲက ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက အတွင်းရေးမှူးတွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ မညီညွတ်သော ကိုယ်အမူအယာ၊ နှုတ်အမူအယာတွေအပြင် လုပ်ငန်းခွင်ရှိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ပြောဆိုဆက်ဆံပုံများ ပါဝင်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရေးမှူးအသင်းက ရှုံ့ချကြောင်း စာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဖြူဖြူထွေးက “ဒီကြော်ငြာလေးကတော့ Director သင်ပေးတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာပါ ဒီလို ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အပြုအမူ မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် သမီးအနေနဲ့တောင်းပန်ပါတယ် 🙏🙏🙏 ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွန်း သမီးကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ထားတာ မဟုတ်တော့ Secretary တစ်ယောက် ရဲ့ နေထိုင်မှု့အဆင့်အတန်းကို သမီးလေ့လာမထားမိပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် သမီးရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုဟာ Secretary ဝန်ထမ်းတွေ အပေါ် ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုင်မှုကြောင့် သမီးအနေနဲ့ အနူးအညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ရှင်။ နောက်နောင် ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လဲ ဇာတ်ညွှန်းကိုသေချာ ဖတ် ဂရုစိုက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပါ့မယ်🙏🙏🙏” ဆိုပြီး အနူးအညွတ် ပြန်လည်တောင်းပန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ စတီးလ်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဖြူဖြူထွေး သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကြော်ငြာတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရေးမှူးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေခဲ့တာကြောင့် အတွင်းရေးမှူးတွေရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဖြေရှင်းတောင်းပန်လာမှုကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အတွင်းရေးမှူးတွေနဲ့တကွ ပရိသတ်ကြီးလည်း နားလည်ခွှင့်လွှတ်ပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Phyu Phyu Htwe & Myanmar Professional Secretary Association’s fb
နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးမှာ တစ်သောင်းတန်အထပ်လိုက်ကိုပံ့သကူပစ်ပြီးကုသိုလ်ယူမယ့် နန်းဆုရတီစိုး
နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးမှာ တစ်သောင်းတန်အထပ်လိုက်ကိုပံ့သကူပစ်ပြီးကုသိုလ်ယူမယ့် နန်းဆုရတီစိုး ရုပ်ရည်ချောမောလှပသလို စိတ်ထားကောင်းတဲ့ အဆိုတော်၊မင်းသမီးချောလေးကတော့ နန်းဆုရတီစိုးပါ။ အနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလျှောက်လှမ်းခဲ့ပြီး ပရိသတ်အချစ်တွေကို ရယူပိုင်ဆိုင်ထားဆဲသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နန်းဆုကတော့ နေ့ထူးနေ့မြတ်လေးမှာ ကုသိုလ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာပါ။ နန်းဆုကတော့တန်ဆောင်းမုန်းလပြည့်နေ့မှာ ပံ့သကူလှူမယ့်အကြောင်းကို “တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ မှာ ပံ့သကူအလှူလေးတွေ လှူဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေကြပုံလေးတွေပါ ချစ်စရာအစဉ်အလာအလေ့အကျင့်လေးမို့ နန်းဆုလည်း ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ လိုက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ပံ့သကူအလှူလေးတွေ ရရှိသူတွေအားလုံး စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင့် နန်းဆုတို့ ပံသကူပစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတာနဲ့ လိုက်ပစ်တဲ့ video လေးကို ညကျ တင်ပေးမယ်နော် ချစ်ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံး တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေမှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ အပူအပင်တွေကင်းဝေးပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင့်” ဆိုပြီးတော့ သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်အကောင့်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းမျှဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်သာင်းဆန်အထပ်လိုက်ကိုလှူဒါန်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ ရုပ်ချောသလော စေတနာသဒ္ဓါတရားထက်သန်လွန်းသူလေးပါပဲနော်… Source : NansuYatiSoe
Credit. Cele gabar
ရွှေတိဂုံဘုရားကို လမ်းပေါ်ကနေ ဖူးမြှော်ရတဲ့ ဘုရားဖူးတွေအတွက် အေးအေးဆေးဆေးဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ ခုံလေးတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)
ရွှေတိဂုံဘုရားကို လမ်းပေါ်ကနေ ဖူးမြှော်ရတဲ့ ဘုရားဖူးတွေအတွက် အေးအေးဆေးဆေးဝတ်ပြုနိုင်ဖို့ ခုံလေးတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်ဖန်တီးရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) ဟာဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပျော်ပျော် နေတတ်တဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်ပြီး ရဲရင့်ထက်မြက်လွန်းတဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း) ကို ပရိသတ်တွေသာမကပဲ အနုပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကပါ ချစ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) က သူကိုယ်တိုင် ရုပ်ရှင်နဲ့ ကြော်ငြာတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာ အလုပ်လေးတွေလုပ်လိုက် အလှူလေးတွေလုပ်လိုက်နဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ညီညီမောင် (စမ်းချောင်း) က ဒီတစ်ခါမှာလည်း ရွှေတိဂုံဘုရားကို ဖူးမြှော်တဲ့ ဘုရားဖူးပြည်သူတွေအတွက် အလှူလေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်လာပါတယ်။ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) က “ရွှေတိဂုံ ဘုရား အရှေ့ဘက်မုဒ် ဘုရားဖူးများ ထိုင်ရှစ်ခိုးဖို့ ခုံ တွေလှူဖြစ်ပါတယ် နိုင်သလောက် ကုသိုလ်ပေါ့ရှင်။ ဘုရားဖူးတွေ ကျောက်ပြားပေါ် မထိုင်ပဲ ခုံလေးပေါ်ကနေ ဝတ်ပြုနိုင်အောင်ပါ။ ကုသိုလ် ထပ်တူရကျပါစေနော် တန်ဆောင်တိုင် လပြည့်ညအကြို ကုသိုလ်🙏🏻❤️” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ကုသိုလ်လေးကို မျှဝေပေးလာပါတယ်။ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း) ကတော့ ဘုရားတွေမဖွင့်သေးချိန်မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားကို လမ်းပေါ်ကနေ ဖူးမြှော်ရတဲ့ ဘုရားဖူးတွေအတွက် အေးအေးဆေးဆေးဝတ်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ ခုံလေးတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
လုပ်ယူဖို့တောင် ခဲယဉ်းလှတဲ့ လုံးဝကိုကွက်တိကျနေသော အရာများ
By JohnSmithPosted on November 28, 2020
လူသားများဟာ အလွန် ဖန်တီးတတ်ကြသောကြောင့် သူတို့၏ပတ်၀န်းကျင်ရှိ လိုအပ်ချက်၊ချိူ့ယွင်းချက်များစွာကို အမြဲရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ထိုအရာအများကြီးထဲကမှ တစ်ချိူ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေဟာ လုပ်ယူထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲတစ်ထပ်တည်းကျကာကွတ်တိဖြစ်နေတဲ့ပုံရိပ်အချို့ကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁)ကုန်တင်ကားရဲ့အမိုးနဲ့ကွက်တိကျနေတဲ့လှို‌င်ခေါင်းတစ်ခုရဲ့ အမိုး (၂)ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နံ့သာ အမှုန့်အမျိုးမျိုးကို ထားရှိသည့်ပုံစံ။ (၃)သဘာ၀ကျောက်တုံးထဲကလူသားတွေလုပ်ထားသလိုသေချာသပ်ရပ်စွာတည်ရှိနေတဲ့ ကုဗတုံးတစ်ခု (၄)စက်လှေကား ကလိုင်းတွေနဲ့ ဖိနပ်ကလိုင်းတွေကွက်တိကျနေပုံ (၅)ရေလုံးရဲ့အရွယ်အစားကိုပါကွက်တိချိန်ထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ ဘေစင်တစ်ခု (၆)လက်တွေ့ဘ၀ကမြွေဂိမ်းဆော့နေသလိုသွားလာနေတဲ့ မြွေတစ်ကောင် (၇)သွားတိုက်ဆေးဗူးရဲ့ အတွင်းဘက်ပုံနဲ့ အဖုံးမှာကျန်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်နှစ်ခုကွက်တိကျနေပုံ (၈)မတူညီတဲ့လျှပ်စီးတန်းနှစ်ခုကိုဆက်ကြည့်ရာမှာ တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေပုံ (၉)ဟင်းချက်ဖို့ကြက်ဥတွေကိုဖောက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ (၁၀)မုန့်တွေနဲ့အတုံးဆက်တဲ့ဂိမ်းများဆော့ထားသလားထင်ရတယ် (၁၁)အထဲကမုန့်နဲ့အပြင်ကပုံကိုကိုက်ညီအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောထားသောအခါ (၁၂)ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ အသီး တွေကိုစီ ထားတာပါလဲ? (၁၃)ဒီမှို‌ တွေကို စားလို့ရမရတော့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ မှိုပွင့် ပုံစံက တော့အတော်ကိုလှ‌ နေပါတယ်။ (၁၄)သစ်များကို အလွန်တော်တဲ့သစ်ဖြတ်သမားနဲ့ စကေးကျတဲ့တင်ပို့သယ်ဆောင်သူတို့ တွေ့‌ သောအခါ။ (၁၅)ဒီကြော်ငြာစာတွေ ဝေတဲ့သူဟာ သူ့အလုပ်ကို တော်တော်ချစ်တယ်နဲ့တူပါတယ် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားခဲ့ပေးလို့ (၁၆)မီးပြတိုက်ပန်းချီကားတစ်ချပ်နဲ့နေအလင်းရောင်တို့ဆုံကြသောအခါ (၁၇)ဈေးလာဝယ်သူတွေကဘဲစည်းကမ်းရှိတာလား ဆိုင်ကဘဲ သပ်ရပ်လွန်းတာလားခွဲခြားမထိ (၁၈)ဒီလောက် လုံး၀န်းပြီးလှတဲ့ နှင်းလုံးကိုတော့ မပစ်ဆော့လောက်ပါဘူး။ Credit
By JohnSmithPosted on November 28, 2020 November 28, 2020
အိပ်ချင်နေတဲ့ တက္ကစီဒရိုင်ဘာအဘကို ပေးအိပ်ပြီး သူကိုယ်တိုင် ကားမောင်ပေးတဲ့ ခရီးသည်မလေး ဖီလစ်ပိုင်မှာ Christina Tan လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ တက္ကစီတစ်စီးကို ငှားစီးခဲ့ပါတယ်။ သူငှားစီးတဲ့ တက္ကစီဒရိုင်ဘာဦးလေးကြီးဟာ အသက် ၇၀ အရွယ် အဘတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အဘဟာ သူအရမ်းအိပ်ချင်နေတယ်လို့ ကားမောင်းဖို့အတွက်အဆင်မပြေကြောင်းပြောတဲ့အခါ ခရီးသည်အမျိုးသမီးက သူသွားချင်တဲ့နေရာကို သူကိုယ်တိုင်ဘဲ ကားကို မောင်းပြီး တက္ကစီသမားအဘကို ကားနောက်ခန်းမှာ အိပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ခရီးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ တက္ကစီးမောင်းတဲ့ အဘကို ကျသင့်တဲ့ငွေကို ပေးပြီး အသက်ကို မေးလိုက်ပါတယ်။အသက် ၇၀ရှိပြီဆိုတာ သိတဲ့အခါ ကားကို အနားယူပြီးမှ ဆက်မောင်းဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဘဟာ owner ကြေးပေးရတာနဲ့ မိသားစုကို စားဖို့နေရေးအတွက်ရယ် အဆင်မပြေမှာဆိုးတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ Christina ရဲ့ အဆိုအရ တက္ကစီသမားအဖိုးဟာ အရမ်းကို ပင်ပန်းနေတဲ့ပုံပေါက်ပြီး အရမ်းလည်း အိပ်ချင်နေပါတယ်။ သူပေးအိပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့ အဖိုးဟာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားပြီး ဟောက်တောင် ဟောက်နေပါတယ်။ ခရီရောက်ပြီး အဖိုးအိုနိုးလာတဲ့နောက်မှာတော့ Christina ဟာ အဖိုးအိုနဲ့ ဓာတ်ပုံအတူတူတွဲရိုက်ပြီး ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကို facebook ပေါ်မှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ facebook သုံးစွဲသူတွေတော်တော်များများက သူမရဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့အကျင့်လေးကို ချီးကျူးပြီး မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ လောကမှာ တကယ်လိုအပ်တဲ့အချိန် ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီလိုက်ရတာ တစ်ဖက်သူအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သလို ကိုယ့်အတွက်လည်း ဘာနဲ့မှ လဲလို့မရတဲ့ ကြည်နူးမှုမျိုးကို ခံစားစေရပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံက ပေးအပ်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို လူမင်း ရရှိ
ရုရှားနိုင်ငံက ပေးအပ်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို လူမင်း ရရှိ နို့ဘီလူးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမင်းကတော့ ဒီလထဲမှာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ဆုပေးပွဲတွေက ချီးမြှင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုတွေကို ရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံ၊မော်စကိုမှာကျင်းပတဲ့ “ Eurasia International Monthly Film Festival “ မှာ နို့ဘီလူးဇာတ်ကားနဲ့ဒါရိုက်တာ လူမင်းက အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆုကို ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ “အောင်သီရိ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ နို့ဘီလူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့တော်တွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖြစ်သည့် 6th Year “ Eurasia International Monthly Film Festival “ (October 2020) Competition တွင်Best Director Winner အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုရှင် အဖြစ်လူမင်း အား ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခံရပါသည်” ဆိုပြီး နိုဝင်ဘာ(၂၇) ရက်နေ့က အောင်သီရိရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးပေ့ခ်ျမှာ တင်ထားပါတယ်။ ထို့အပြင် ၂၀၂၁ခုနှစ် ၊ မော်စကိုမှာ ထပ်မံကျင်းပမယ့် “Eurasia Festival live screening event “ မရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲအတွက်လည်း ဆန်ကာတင် Nominee အဖြစ် ဆက်လက်ရွေးချယ် ခံထားရပါသေးတယ်။အခု ရုရှားနိုင်ငံမှာရရှိခဲ့တဲ့ ဆုဟာ နို့ဘီလူးရုပ်ရှင်အတွက် တတိယမြောက် ဆုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ လူမင်းအတွက်လည်း နို့ဘီလူးနဲ့ အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာဆု သုံးဆု တိတိ ဆွတ်ခူးရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ လူမင်းရိုက်ကူးထားတဲ့”နို့ဘီလူး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ ဘူတန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Druk International film festival (DIFF) ဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာ ဇာတ်ကားဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု၊ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုနှင့် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု စတဲ့ ထူးချွန်ဆု (၄)ဆုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်တဲ့ Calcutta International Cult Film Festival မှာလည်း ထူးချွန်ဆု ငါးဆု ဆွတ်ခူး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နို့ဘီလူးရုပ်ရှင်ကားကြီးကို အောင်သီရိရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက ထုတ်လုပ်ပြီး ဒါရိုက်တာ လူမင်းကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ သရုပ်ဆောင် လူမင်း၊ ဇေရဲထက်၊ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီး အကယ်ဒမီ ဒေါ်မြတ်မွန် နဲ့ ရွှေမှုံရတီ တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ အတွင်းက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နို့ဘီလူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒါရိုက်တာ လူမင်းဟာ ၂၀၀၂ခုနှစ်မှာ ရွှေမှုံကြဲတဲ့မိုးကောင်ကင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု၊ ၂၀၀၅ခုနှစ်မှာတော့ ကျန်စစ်မင်းနဲ့ အကယ်ဒမီရရှိခဲ့ ပြီး၂၀၁၆ခုနှစ်မှာတော့ လူမင်းက ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့်မြိုင်ရာဇာတာတေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ ဆုကို ရရှိထားသူပါ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Star Awards ဆုပေးပွဲမှာတော့ Actor In A Supporting Role Awardဆုကို ငယ်ကျွန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူဝါဒကို သာသနာပြုနေသော သာသနာ့အာဇာနည် ဆရာတော်အရှင်ဗုဒ္ဓရက္ခိတ
ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူဝါဒကို သာသနာပြုနေသော သာသနာ့အာဇာနည် ဆရာတော်အရှင်ဗုဒ္ဓရက္ခိတ ဆရာတော်ရဲ့ ငယ်အမည်က စတီဗင်။အာဖရိကတိုက်၊ ယူဂန်ဒါ နိုင်ငံငယ်လေးက ခရစ်ယာန်မိသားစုမှာ Steven(စတီဗင်) ကို၁၉၆၆-ခုနှစ်က ဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ငယ်ငယ်က ဘာသာတရားဆိုလို့ ခရစ်ယာန်နဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုပြီးဘာသာ၂-ခုတည်းသာရှိတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာပါ။ ၁၀ ကျော်သက်အရွယ်ရောက်မှအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဂေါတမ ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးကြောင်းနာမည်လောက်သာ ကြားဖူးခဲ့သူပါ။
နောက်ပိုင်းမှာသူဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကို နိုင်ငံခြား ပညာသင် သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာထိုင်းလူမျိုးရဟန်းတော် ၂-ပါးနဲ့ ခင်မင်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဝါဒကို အနည်းငယ်လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လေ့လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားတွေများတဲ့ ဒေသတစ်ခုမှာဒိုင်ဗင်ပစ်၊ ရေကူး နည်းပြလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဘဝဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုပြည့်ပြည့်စုံစုံ နေခဲ့ရပါတယ်။
သူဟာလောကီဥစ္စာပြည့်စုံမှုတွေ မှာ ဘယ်လိုမှ မမွေ့လျော်နိုင်တော့တဲ့နောက်မှာလက်ရှိအလုပ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး မိခင်နိုင်ငံကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။မိသားစုနဲ့ ဆွေမျိုးတွေကသူ့ကို ခရီးဆောင် အိတ်ကြီးသယ်ဆောင်ပြီး ပြန်လာမဲ့အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးသမားကြီးအဖြစ် မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာပါ။သူ့ကိုတကယ်တွေ့လိုက်ရတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ စာအုပ်တွေနဲ့ ဒိုင်ဗင်ပစ်၊ ရေးကူးရာမှာသုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေသယ်လာတဲ့ ဆံပင်ရိတ်ထားတဲ့ ယောဂီတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အချို့သော ဆွေမျိုးတွေက ဆိုရင် စာအုပ်တွေအားလုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့နဲ့ ဘိုင်ဘယ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာထိုင်ဖတ်နေဖို့၊ သူ့ကို ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ပြန်ဖြစ်လာဖို့စည်းရုံးကြသေးတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မရှိတဲ့ဒေသမှာသူဟာတစ်ဦးတည်း တရားအားထုတ်နေတယ်။ တိုင်ပင်စရာမိတ်ဆွေနဲ့ နည်းခံစရာဆရာ မရှိတဲ့ဘဝမှာ သူမနေနိုင်တော့ဘူး။ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ အမှန်တရားကို ရှာဖွေဖို့ သူဟာ အမိမြေကို နောက်တစ်ကြိမ်စွန့်ခွာရပြန်တယ်။တောင်အမေရီကား မြောက်အမေရီကားမှာ ဝိပဿနာတရားတွေ အားထုတ်ခဲ့တယ်။Tathagata Meditation Center TMC မှာ တရားအားထုတ်ခွင့်ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့သူဟာ ရဟန်းဝတ်ဖို့ကို ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
TMC စင်တာကပဲ ဗီယက်နမ်ဆရာတော်တွေ၊ မြန်မာဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ သာကီဝင်မင်းမျိုးမှ ရဟန်းပြုသွားသော သိဒ္ဓတ္ထဂေါ်တမ ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ကို ရယူခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓရက္ခိတ ဘွဲ့တော်နဲ့ မြင့်မြတ်သော ရဟန်းဘဝကို ခံယူလိုက်တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လိုက်တော့ မိခင်ဖြစ်သူက တအံ့တသြဖြစ်ရတယ်။သားရဟန်းကိုကြည့်ပြီး Steven မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ မေးသေးတယ်။ဟုတ်မှန်ကြောင်း ပြောပြတော့ မယ်တော်ကြီးဟာ သားဖြစ်သူကို အိမ်အရောက်ပြန်ပို့ပေးသောGod(ဘုရားသခင်)ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောသေးတယ်။ သားဖြစ်သူကတော့သူ့ကို အိမ်ရောက်အောင် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသော ဘုရားသခင်ဆိုတာလုံးဝမရှိကြောင်းကောင်းကောင်း နားလည်နေတယ်။
ဒါပေမဲ့ အမေဖြစ်သူ စိတ်အနှောင်အယှက် မဖြစ်စေချင်လို့ ဘာမှ မပြောပဲနေခဲ့တယ်။ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်ကြီးနဲ့ သင်္ဃန်းဝတ်ကြီးနဲ့ အိမ်မှာ ကြာကြာနေလို့မသင့်တော်တာကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းလေး ဖြစ်လာအောင်အားထုတ်ရတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံTMCစင်တာမှ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကျေးဇူးနဲ့ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးသော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစင်တာတစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းသုံးရာ၊ ဆွမ်းခံရာ၊ အစစအရာရာမှာ နားမလည်သူတွေများလို့ အခက်အခဲအမျိုးမျိုး တွေ့ရပါတယ်။
ွမန်မာပြည်ကပါလာတဲ့ သံဃာတော်များကိုင်တဲ့ ယပ် ကို တင်းနစ်ကစားနည်းတစ်မျိုးအတွက် ဘတ်တန်လို့ ထင်သူတွေ၊သပိတ်ကိုဗုံးထင်သူတွေ၊ဘောလုံးထင်သူတွေဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုကြည့်ပြီးတိုင်းရင်းဆေးရောင်းတဲ့ Maasai ထင်သူတွေ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းခံထွက်လို့ ဆွမ်းလောင်းရကောင်းမှန်းသိသူကလည်း မရှိသလောက် ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်ကတော့ ဖိနပ်မပါခြေဗလာနဲ့ ကြိုးစားပြီး ဆွမ်းခံထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရတဲ့ ဆင်းရဲသားများကတောင်ဆွမ်းလှူဖို့ သဒ္ဒါတရားတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မိတ်ဆွေအချို့ရဲ့ အဆက်အသွယ်နဲ့ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထိုင်းမိသားစုတွေ၊သိရီလင်္ကာမိသားစုတွေရဲ့လိပ်စာကို ရခဲ့ပါတယ်။မယ်တော်ကြီးကိုပါ အတူတကွအဆိုပါ မိသားစုတွေဆီကိုကြွခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးတွေ စုပေါင်းဖွင့်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထေရဝါဒပုံစံစနစ်တကျ သင်္ဃန်းရုံထားတဲ့ ဆရာတော်ကို ဖူးမြှော်ရလို့ ထိုင်းလူမျိုးတွေဟာဆွမ်းကိုလည်း လောင်းလှူကြ ရိုသေစွာရှိခိုးကန်တော့ကြတာ တွေ့တော့ မယ်တော်ကြီးကအလွန်တရာ အံ့သြခဲ့ပါတယ်။သီရိလင်္ကာလူမျိုးကလည်းစက်ရုံတစ်ခုရဲ့ပိုင်ရှင်အရပ်မြင့်မြင့်လူကြီးလူကောင်း တစ်ယောက်ပါ။
ဆရာတော်ကို မြင်တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ ထုံးစံအတိုင်းရိုသေစွာရှိခိုးကန်တော့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ မယ်တော်ကြီးရဲ့စိတ်ခံစားမှု သဒ္ဓါတရားကို မြင်လို့ ဆရာတော်ကလက်ျာတော်ရံ အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မယ်တော်ကြီး ချွတ်ခန်းကို သတိရခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းလူမျိုးတွေက ဆိုရင်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာ ဆရာတော် သီတင်းသုံးသရွေ့ ဆွမ်းအဖို့ကိုတာဝန်ယူပါရစေလို့ လျှောက်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့တစ်ချိန်တုန်းကခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလောလောဆယ်အနေအားဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ ၁၀-နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်သောမယ်တော်ကြီဟာ ဗုဒ္ဓ၏ဆင်းတုတော်ရဲ့တင့်တယ်လှတဲ့ရူပကာယတော်ကိုကြည်ညိုတတ်ပြီဖြစ်ကြောင်း နဲ့ ဗုဒ္ဓဝါဒကိုလေ့လာ လိုကြောင်းသားရဟန်းပြောပါတယ်။
သားဖြစ်သူက တရားဓမ္မတွေ ဟောပြလို့ မယ်တော်၊နှမတော်နဲ့ ယောက်ဖ၊ တူ/တူမ များအပြင် မိတ်ဆွေအချို့နဲ့ အနည်းငယ်သောယူဂန်ဒါ နိုင်ငံသားတွေဟာသရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ ငါးပါးသော နိစ္စသီလတို့ကိုတည်ဆောက်သူ ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သာဝကများဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်လာကြပါတယ်။အခုတော့အာဖရိကတိုက်ရဲ့ ရတနာမြေ ဖြစ်သော ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ The Pearl of Africa မှာ ဗုဒ္ဓဝါဒဟာ စတင်လို့ အမြစ်တွယ်ခဲ့ပါပြီ။ဆရာတော်၏ပြောပြချက်အရ အာဖရိကမှာ ဆရာတော်၏ စွမ်းဆောင်မူကြောင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူဦးရေလေးဆယ်ကျော် ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါသည်။
သကျပုတ္တိယ အရှင်အရိယာလင်္ကာရ CopyFrom-အယူဝါဒများနှင့်စစ်မှန်သောတရား
သားလေးမွေးနေ့အတွက် အမေ့ရဲ့လက်ဆောင်ထုတ်လေးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
သားလေးမွေးနေ့အတွက် အမေ့ရဲ့လက်ဆောင်ထုတ်လေးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့လေးမှာပြောပြပေးသွားမှာကတော့ ကိုရွှေတို့ သားအမိ အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့လစာထုတ်ရက် ကိုရွှေ တက်တက်ကြွကြွနှင့်အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ မိန်းမဖို့ သားဖို့ သမီးဖို့က ဘာလေး စိတ်ထဲမှာ ခွဲတမ်းလေးချရင်း ပီတိလေးနဲ့အိမ်ပေါ်လှမ်းတက်နေတုန်း “ထွီ” သလိပ်တွေ အခဲလိုက်နဲ့စီးထွေးခံလိုက်ရတော့ ကိုရွှေ အပျော်စိတ်တွေ ဘယ်ရောက်မှန်း မသိတော့။ ပုဆိုးကိုဖြည်ဝတ် ခါချရင်း “အမေကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ အိမ်ပေါက်ဝလေးလည်း ကြည့်ပါအုန်း။ ကျွန်တော့ပုဆိုးပေကုန်ပြီ ညစ်ပတ်လိုက်တာ တကယ်ပဲ”
အမေအိုက ကဗျာကရာ “အမေမမြင်လိုက်လို့ပါသားရယ် ချောင်းတအားဆိုးနေတာ သလိပ်ဟက်လို့ရတုန်းလေး အမြန်ထွေးချလိုက်တာ အမေပြန်သုတ်ပေးမယ် လာ လာ သား အပေါ်တက်ခဲ့” “နေပါအမေရာ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် မိန်းမရေ မောတယ်ကွာ ရေခပ်ခဲ့အုန်း” ကိုရွှေ အမေ့ရဲ့လက်တွေကို ဖယ်လိုက်ပြီး အိမ်ပေါ်က ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ် လှဲချလိုက်ရင်း သူ့မိန်းမနဲ့ ကလေးတွေ တန်းစီခေါ်နေတေ့သည်။
ရတဲ့လစာနှင့် ဝယ်ခြမ်းလာသည်များကို ခွဲတမ်းချနေတုန်း ကိုရွှေ အမေ့ဆီတစ်ချက် ကြည့်လိုက်သည်။ အမေက ဘုရားစင်ရှေ့ဘုရားရှိခိုးရင်း ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ဆိုးနေသည်။ “မိန်းမ အမေ ချောင်းတွေ တအားဆိုးနေပါ့လား ဆေးလေးဘာလေး ဝယ်မတိုက်ဘူးလား” “ရှင့်အမေက ဒီဆေးလည်းမကြိုက် ဟိုဆေးဆိုလည်းဘာဖြစ်နဲ့ နေပါစေ။ အရမ်းအဆိုးကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး မနက်မှ အဆုတ်ပုံလေး ဘာလေး ဝယ်တိုက်လိုက်မယ်”
ကိုရွှေ ဘာမှမပြောတော့ သူ့မိန်းမပြောတာလဲ ဟုတ်ပါတယ်လေ ရှေးရိုးဆန်တဲ့သူ့အမေအကြောင်း သူသာအသိဆုံးမလား။ သူတို့မိသားစုလေးက ကုမ္ပဏီလခစား သူ့ဝင်ငွေနှင့်အကျပ်တည်းကြီး မဟုတ်ပေမယ့် သိပ်အချောင်လည်ကြီးလည်းမဟုတ် အဖေမရှိတည်းက သားအမိနှစ်ယောက် ရုန်းကန်လာရင်း သူအိမ်ထောင်ပြုတော့ အမေ့ကိုအပါခေါ်ရသည်။ အိမ်ငှါးဘဝနှင့် သူတို့သားအမိကို အိမ်ပေါ် နေခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ သူ့မိန်းမကိုပဲ ကျေးဇူးတင်နေမိတော့သည်။ ယောက္ခထီး ယောက္ခမ မရှိကြတော့ သူ့အမေ ကိုမိန်းမက အမေလိုသဘောထားမှာ မလွဲနိုင်ပါ။ နေ့တိုင်းသူက အိမ်မှာမရှိပေမယ့် သူပြန်လာတိုင်း အမြဲပြုံးရွှင်နေတဲ့အမေ့မျက်နှာကို ကြည့်တာနှင့်သူသိနိုင်သည်။အမေ့ဆီက တစ်ခါမှ တိုင်တောသံကြားရဖို့ဝေးလို့အမေ ပျော်နေတဲ့ အကြောင်းသာ အမြဲကြားရတတ်တယ်။ သူ့ရုံးပိတ်ရက်ရောက်လို့မိသားစု တစ်နေရာရာကို အလည်သွားတိုင်း အမေဘယ်တော့မှ မလိုက်ချေ။
သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခေါ်ရမည့်တာဝန်ကရှိပေမယ့် ခေါ်တိုင်းငြင်းလေ့ရှိတဲ့ အမေ့ကြောင့် သူမခေါ်ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ခုတစ်လောလေး သူသတိထားမိသည်မှာ အမေ့ကြည့်ရတာ အတော်လေး ပိန်သွားပုံရတယ်။ ချောင်းဆိုးသံ မကြားရတော့လို့ နေကောင်းသွားပြီ အထင်နဲ့ ဒီအတိုင်း နေမိသည်။ ဒီနေ့အလုပ်ကပြန်လာတော့ မရောက်တာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အမေ့အခန်းလေးထဲ သူဝင်သွားခဲ့သည်။အမေ့လက်ထဲမှာ အဝတ်တစ်ခုကို သည်းကြီးမည်းကြီး ချုပ်နေသည်။
နှစ်ပေမီးချောင်းက သိပ်အလင်းကြီးမဟုတ်တော့ အမေမျက်စိပျက်တော့မှာပဲ ဟူသောစိတ်ဖြင့် စိတ်ထဲအနည်းငယ် စိတ်တိုသွားမိရင်း “အမေ ညဘက်ကြီး ဘာတွေ ဒီလောက်ချုပ်နေတာလဲ ကိုယ့်အသက်လဲကိုယ်ကြည့်အုန်း။ မမြင်မစမ်းနဲ့အမေရယ် ချထား ချထား ” သူ့အသံက စိတ်ထဲကစိုးရိမ်မိပေမယ့် ပြောနေကျအတိုင်း လေသံကမာသွားသည်။ ရုတ်တရက်မို့အမေလည်းလန့်သွားပုံရသည်။ “ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးသားရယ် အမေအင်္ကျီအပြဲလေး ချုပ်နေတာပါ”
“ဒါအမေ့အင်္ကျီမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော့်မိန်းမအင်္ကျီလည်းမဟုတ်ဘူး” သူ အမေ့လက်ထဲက ဆွဲယူကြည့်လိုက်တော့ အမျိုးသမီးရင်ဖုံးအဖြူလေးကို နှိပ်စေ့လေးတွေ တပ်နေခြင်း ဖြစ်နေသည်။ “အမေ ဒါဘာလုပ်တာလဲသူများအင်္ကျီတွေဘာလို့ ကြယ်သီးယူတပ်နေတာလဲ အမေ့မှာဘာသုံးစရာရှိလို့တုန်း ဘယ်လောက်များရလို့လဲအမေရာ မချုပ်နဲ့ ကိုယ့်အသက်လည်းပြန်ကြည့်အုန်း ၇၀ကျော်နေပြီ သူများတွေမြင်ရင် ကျွန်တော်နွားဖြစ်အောင်လား အမေက ”
ေွပာရင်းနှင့်လေသံတွေ မာသွားတော့ အမေက မျက်ရည်လည်သော မျက်ဝန်းနှင့် သူ့သားကိုငေးကြည့်နေရှာတယ်။ “အေးပါ သားရယ် မလုပ်နဲ့ဆိုလည်း အမေမလုပ်တော့ပါဘူး အမေ့ကြောင့် ငါ့သားဂုဏ်မပျက်စေရပါဘူးကွယ် အမေ ကတိပေးတယ်နော်သား သွား သွား သားပင်ပန်းလာတယ် နားချည်တော့” “အင်း ဒါဆိုလဲပြီးရော နောက်တစ်ခါထပ်မမြင်ရစေနဲ့နော် အမေ ” သူ အမေ့အခန်းထဲက ထွက်လာတော့ ချောင်းတစ်ချက် ဟန့်သံကြားလိုက်သလိုမို့ “မိန်းမ မင်းမပြောဘူးလား ငါ့အမေမမြင်မစမ်းနဲ့ ဘယ်တုန်းတည်းက ယူချုပ်နေမှန်း ငါလဲမသိရပါလား” “အဲ့ဒါပဲလေ ကျွန်မပြောလည်း ရှင့်အမေကပြောရမှာမို့လို့လား ကျွန်မလည်း ကိုယ့်အိမ်အလုပ်နဲ့ကိုယ် မအားရတဲ့ကြား နေရာတကာတော့ ဘယ်လိုက်ကြည့်နေနိုင်မလဲ ရှင့်သားသမီးတွေက ဘာညာစမာကလာဆိုပြီး သူ့မိန်းမရဲ့ ညည်းချင်းတွေကို ဆက်နားမထောင်တော့ပဲ သူအိပ်လိုက်တယ်။ အမေကတော့လေ ဘာတွေလုပ်မှန်းကိုမသိဘူး အေးဆေးနေလို့ရရဲ့သားနဲ့ မနေနိုင်ဘူး သက်ပြင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်း သူအိပ်ပျော်တော့သည်။
ဒီနေ့ကိုရွှေ အိမ်ပြန်လာတော့သူ့မိန်းမက စီးပြောပါ၏။ “ကိုရွှေရေ ကျွန်မအမျိုးတွေနဲ့ ဘုရားဖူးသွားမလို့ ကလေးနှစ်ယောက်ခေါ်သွားမယ်။ အမေ့စားသောက်ရေးအတွက် ကျွန်မတူမလေး ခေါ်ထားပေးခဲ့မယ်” “ဘယ်တော့လဲကွ မင်းက ဗြုန်းစားကြီး ငါတော့လိုက်မရဘူး မင်းတို့သားအမိပဲလား အမေရော” သူ့စကားမဆုံးခင် အမေက ဝင်ပြောတယ်။ “ချွေးမက ခေါ်ပါတယ်သားရယ် အမေမလိုက်နိုင်လို့ပါ ခရီးပမ်းတဲ့ဒဏ် မခံနိုင်ဘူးလေ”
သူ့မိန်းမက ဘာတစ်ခွန်းမှ ဝင်မပြော ဘောက်ဆတ်ဆတ်နဲ့သူ့လက်ထဲက အိတ်ကိုယူပြီး အခန်းထဲဝင်သွားတယ်။အမေကထုံးစံအတိုင်း ဘုရားဆက်ရှိခိုးလို့ ပြေးလွှားဆော့နေတဲ့ သားနဲ့သမီးက ဖွားအေကိုပတ်ပြေးနေတယ် ။ အမေက ဝတ်ပြုပြီး သူ့အနားသို့လျှောက်လာရင်း “သားလဲ လိုက်ချင်လိုက်သွားလေ မိသားစုပျော်ပျော်ပါးပါး ခရီးရှည်သွားရခဲတယ် အမေ့အတွက် ဘာမှမပူနဲ့ တူမလေးလာမယ် ပြောတယ်မလား သား အလုပ်ရှင်ကိုခွင့်တောင်း ကြည့်ပါလား ”
“နေပါစေအမေ မလိုက်တော့ဘူး သူ့အမျိုးတွေနဲ့ သွားပါစေ နောက်ကြုံမှမိသားစု သက်သက်သွားမယ်” အမေက ဘာမှထပ်မပြောတော့ အဲ့ဒိညက အမေ့အခန်းလေးဆီက ချောင်းသံတွေ ဆက်တိုက် ကြားရသည်။သူ ကြားပေမယ့် တနေကုန်ပင်ပန်း လာတာကြောင့် မျက်လုံးတွေ မဖွင့်နိုင် မိန်းမကတော့ ခရီးသွားဖို့ညလုံးပေါက်ပြင်ဆင်ချက် ပြုတ်နေသည်။ တရေးနိုးတော့ အမေ့ချောင်းသံ မကြားရတော့ချေ။
အမေသက်သာပြီထင်သည် ခေါင်းအုံးပေါ် ပြန်လှဲချရင်း သူပြန်၍အိပ်ပျော် သွားတော့သည်။ နောက်နေ့မနက် မိန်းမနှင့်ကလေးတွေ ခရီးထွက်သွားကြတော့ အမေကသူ့အတွက်ထမင်းချိုင့် ပြင်ဆင်ပေးနေသည်။ “အမေ ညကချောင်းသံကြားတယ် နေမကောင်းရင် ဆေးခန်းလေး သွားပါလား ဘေးအိမ်က မကြူသမီးလေး အဖော်ခေါ်သွားလေ ဒါမှမဟုတ် သား ပြန်လာခဲ့ရမလား ” “သက်သာနေပါပြီ သားရယ် အမေ့အတွက်မပူနဲ့ ကဲ သွား သွား ”
သူလည်း အမေပြင်ပေးတဲ့ ထမင်းချိုင့်ဆွဲပြီး အလုပ်ကို လာခဲ့ပါတော့သည်။ တစ်နေ့လုံး အလုပ်ထဲမှာ စိတ်နစ်နေတာနှင့် အမေ့ကိုသတိမရနိုင်ပေ။ ညနေ အလုပ်ပြီးလို့ ကားမှတ်တိုင်တွင် ကားစောင့်နေစဉ်မှာပဲ “ဗျို့ ကိုရွှေ ခင်ဗျားမိန်းမ မရှိတော့ လွတ်လပ်ရေးရနေတာပေါ့လေ ဟုတ်လား ဟား ဟား ” “ဟား ဟား မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ ခင်ဗျားကတော့ ပြောတော့မယ် ဒါနဲ့ခင်ဗျားလက်ထဲက ကော်ဖီမစ် အထုတ်ကြီးတွေ နှစ်ထုတ်သုံးထုတ်ဝယ်ပြီးဒီလောက်အများကြီး ဘာလုပ်ဖို့တုန်း ဧကန္တ အိမ်ကမိန်းမကို မျက်နှာလုပ်ဖို့ထင်တယ်” “အဟား မိန်းမဖို့ မဟုတ်ဘူး အိမ်ကအမေအတွက်ပါဗျာ မနက်ဖြန်တိုင်း ဆွမ်းလေးလောင်းချင်လို့တဲ့ မိန်းမကိုပြောမနေတော့ပါဘူးဗျာ ကိုယ့်အမေတွက် ကိုယ်ပဲဝယ်ပေးရမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား ”
ကိုရွှေ စိတ်ထဲ အမေ့ကို ပြေးမြင်မိသွားသည်။ ကိုဝင်းမြင့်နှင့်သူသည် လခစားဘဝတူချင်း ဖြစ်သည့်အပြင် ကိုယ့်ထက်ပင် သားသမီးဦးရေ များပြား၍ သူ့ထက် အနည်းငယ် ကျပ်တည်းရှာသူ “သွားအုန်းမယ် ကိုရွှေ ခင်ဗျားအမေရော နေကောင်းလား မတွေ့တာကြာပြီ ကျွန်တော်မေးတဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါအုန်း ” သူ ခေါင်းငိုက်စိုက်ရင်း လိုင်းကားပေါ်အရောက် အတွေးတွေ ခေါင်းထဲမှာ အလုအယက် ဝင်နေတော့သည် ။ အမေသည် သူအိမ်ထောင်ကျပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတစ်ခါမျှ မမှာဖူးသလို ဘာလိုချင်သည် ညာလိုချင်သည် မပူဆာခဲ့ဖူး။ သူကလည်း မမေးမိခဲ့ မိန်းမလက်ထဲ ပိုက်ဆံအပ်လိုက်လျှင် သင့်သလို စီမံပေးလိမ့်မည်ဟု သူမှတ်ယူခဲ့သည် နောက်ပြီး အိမ်ပေါ်တွင် မပူပင် မကြောင့်ကျ နေနေရတော့ အမေ့လို သက်ကြီးရွယ်အိုအတွက် ဘာမှလိုအပ်မည်ဟု သူမထင်ခဲ့မိ။ အမေ့အပေါ်တွင် တာဝန်မကျေသလို ခံစားမှုတွေက ရင်ထဲကိုတင်းကျပ်လာစေသလို ရှက်စိတ်တွေတရိပ်ရိပ် ထိုးတက်လာခဲ့သည်။ လမ်းတလျှောက် ဈေးတန်းတွေေ
ငးကြည့်ရင်း သစ်သီးတန်းကို မြင်တော့ နီးရာမှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီး ပန်းသီးအလုံးလှလှ ၅လုံး ဆင်းဝယ်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့အမေ့နားမှာ သူအချိန်ကုန်မည် ပန်းသီးတွေကို ကိုယ်တိုင်စိပ်ကျွေးမည်။ အမေအိပ်ခါနီး အမေ့ကိုနင်းနှိပ်ပေးရင်း မပြောဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်စဉ်ကအကြောင်းတွေ ပြောရင်းအမေ့ကို ပျော်ရွှင်အောင်ထားမည် ။ အတွေးနဲ့တင် သူ့ရင်ထဲကတင်းကျပ်မှုတွေ ချက်ချင်းလွင့်ပါးသလို အိမ်အပြန်ခြေလှမ်းတွေ ပေါ့ပါးသွက်လက်နေသည်။ အမေ သားအမေ့ကို ပစ်ထားခဲ့မိတဲ့ အချိန်တွေ အတော်ကြာပြီပဲ။
သားအမေ့ကို မချစ်လို့ မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီနေ့ကစ သားနဲ့အမေ အရင်လို နွေးနွေးထွေးထွေးနေကြမယ်။ ကိုရွှေရဲ့ မျက်နှာပြင် ပျော်ရွှင်မှု အထင်းသားနှင့်အိမ်ပေါ်အတက်မှာတော့” ကိုရွှေ ခင်ဗျားအမေ သွေးအန်လို့ ဆေးရုံကိုခုပဲပို့ခဲ့ရတယ် ခင်ဗျားဆီ ဆက်သွယ်လို့မရတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ရောက်ရောက်ချင်း ခင်ဗျားကိုလာပြောတာ” ” ဗျာ ” ကိုရွှေရဲ့ ရင်ဝကိုဆီးအကန်ခံလိုက်ရတာမျှ သက်သာအုန်းမည်။ လေးညှို့က ပစ်လိုက်သည့် မြှားတစ်စင်းနှယ်
သူချက်ချင်းတဟုန်ထိုး ဆေးရုံသို့ လိုက်သွားသည်။ “ကိုရွှေ လာပြီဟေ့ ဖယ်ပေးလိုက် ” အိမ်နီးချင်းတွေက မျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ သူ့ကို လမ်းဖယ်ပေးကြသည်။ အမေ့ကို သူမြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်အမေ့အင်္ကျီရင်ဘတ် တစ်ခုလုံး သွေးစသွေးနတွေ ပြန့်ကျဲလျက် “အမေ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအမေရယ် ဒီလောက်ဖြစ်နေတာ သားမသိရပါလား သားကိုဘာလို့မပြောတာလဲ အမေရယ် လုပ်ကြပါအုန်းဗျာ ဒေါက်တာ ဒေါက်တာတွေ ဘယ်မှာလဲ ကျွန်တော့အမေ ဘာဖြစ်တာလဲ ဘယ်သူမှ လာမကြည့်ကြဘူးလား ”
စကားတွေဗလုံးဗထွေးနှင့် ဆို့နင့်အက်ကွဲနေသည့် သူ့အသံကို နားထောင်ရင်း အိမ်နီးချင်း အမျိုးသမီးတွေဆီက ရှိုက်သံတွေ ထွက်လာသည်။ အမေ၏ ဖြူဖျော့နေသော မျက်နှာမှမျက်ရည်ပြည့်နေသည့် မျက်ဝန်းအစုံသည် သားကို စိတ်မချသလို ငေးစိုက်ကြည့်နေရှာလေသည်။ သွေးစွန်းနေသော အမေ့နှုတ်ခမ်းများသည် မဟတစ်ဟနှင့် တစ်ခုခုပြောရန် အားယူနေသည့်နှယ် “ကိုရွှေ ခင်ဗျားအမေ ခင်ဗျားမလာခင်လေးတင် အသက်ထွက် သွားရှာတယ် ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကို အပို့နောက်ကျသွားတယ်
ခင်ဗျားအိမ်မှာ ဘယ်အချိန်ထဲက ဖြစ်နေတယ်မသိ ဆန်ခံသီလရှင်လေးတွေက ဒကာမကြီး ထွက်လောင်းနေကျ မလောင်းလို့စိတ်ပူပြီး အိမ်ထဲဝင်ကြည့်မှ ကျွန်တော်တို့ သိရတာ ဆေးရုံကိုရောက်တဲ့အထိ အသက်ပါလာသေးတယ် ခုနလေးကမှ ” စကားသံတွေ သူ့နားထဲတွင်မကြားတစ်ချက် ကြားတစ်ချက် အမေ့ ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းတိုးရင်း အံကိုကြိတ်ခဲ၍ မျက်ရည်တွေတွေကျနေမိသည်။ သူ့နှလုံးသားလဲ တစ်စစီ ကြွေကျသလို ဆို့နင့်မှုကို နှိုင်းပြစရာ ရှာမတွေ့တော့ “အမေရယ် သားမိုက်ကိုခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့သားကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရတာ သူများကတောင် အမေ့ကိုဂရုစိုက်မေးဖော် ရခဲ့ပေမယ့် သားမေးဖို့သတိမရခဲ့ဘူး သားပြန်လာတဲ့အထိလေး ခဏဖြစ်ဖြစ်စောင့်ပါအုန်းလား အမေရယ် အမေ့သလိပ်တွေ ဆီးတွေ ဝမ်းတွေ သားမရွံတော့ပါဘူး သားမိုက်ရဲ့မျက်နှာတည့်တည့်ကို ထွေးပစ်လိုက်စမ်းပါအမေရယ်” နဘေးက ကြည့်နေသူတွေလဲ မျက်ရည် မဆည်နိုင်တော့ “ကိုရွှေ လုပ်စရာရှိတာလေး ဆက်လုပ်ရအောင်ပါ ဖြစ်ပြီးမှတော့ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေ ဖြေသိမ့်နိုင်အောင်သာ ကြိုးစားပါဗျာ ”
အမေ့အပေါ် တာဝန်ကျေဖို့ သူဆုံးဖြတ်မိခဲ့သည့် နေ့မှ အမေသည် သူ့ကိုစွန့်ခွါသွားခဲ့လေပြီ အမေ့ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားသော သူ့အား အိမ်နီးချင်းများက အတင်းဆွဲခွါကြရင်း အမေ့လက်ကလေးက ခုတင်အောက်ကို တွဲလောင်းလေး ထွက်ကျလာသည် “ကိုရွှေ ရှင့်အမေလက်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ အိတ်လေးက ဘာလဲမသိဘူး ဖွင့်ကြည့်ပါလား ” သူသည် အမေ့နားမှာ ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ရင်းအမေ့လက်မှာ ချိတ်ထားတဲ့အိတ်လေးကို ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ အားလုံးကလည်း ဘာဖြစ်မည်ကို သိချင်ကြသဖြင့် ကိုရွှေ အာရုံစိုက်နေကြစဉ် “အမေရယ် ” ” ဝုန်း “ဟူသော အသံနှင့်အတူ ကိုရွှေ ၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီး ဆေးရုံကြမ်းခင်းပေါ်သို့ အရုပ်ကြိုးပြတ် နောက်ပြန် လဲကျသွားသည်။
“ဟာ ဟဲ့ ဟဲ့ လုပ်ကြပါဦး ကိုရွေ ကိုရွှေ သတိထားလေ” ကိုရွှေ ကို ပြေးပွေ့သူက ပွေ့လိုက်ကြပြီး သူ၏အမေလက်ထဲက အိတ်လေးကို သိချင်စိတ်ဖြင့် ဖြန့်ကြည့်ကြသောအခါ “သားကြီး၃၂နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လှူဖို့အမေ့ချွေးနဲစာလေး” ဟူသော စာတန်းပါ စာအိတ်လေး သွေးစွန်းနေတဲ့ အပ်ချည်လုံးနှင့် အပ်ကလေးတစ်ခု စိပ်ပုတီးလေးတစ်ကုံးနှင့်အတူ စာအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ထောင်တန်ခပ်နွမ်းနွမ်းလေး ငါးရွက်ကထပ်ရက်သား အားလုံး၏ မျက်ဝန်းအိမ်တို့သည် မတိုင်ပင်ရဘဲနှင့် မျက်ရည်မိုးတို့သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းကြလေတော့သည်။
ဖတ်ရှု့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ကိုယ်တွေက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေလိုက်မိပေမယ့် အိမ်ကမိဘတွေကို တစ်ခါတစ်လေမှာ ပစ်ထားမိသလို အော်ငေါက်ဆူပူမိသလို ဖြစ်နေတတ်တယ်။ မိဘတွေရင်ထဲက စကားတွေကို မိဘတွေပြောမှ သိရမယ်ဆိုပေမယ့် သားသမီးတွေရင်ထဲကစကားတွေကိုလည်း သားသမီးတွေပြောမှ မိဘတွေက သိရမှာပါ။ နည်းနည်းလေးဖျားရင်တောင် ဆေးခန်းသွားပြဖို့မပြောပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့ရက်လေးမှာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့မိသားစုလေးနဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မူရသ်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါတယ်။
ရိပ်သာတစ်ဆောင်လုံးက အဘိုးဘွားတို့ရဲ့ငွေတွေ လိမ်ယူသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်
တချိန်ကမင့်ကို ဆေးထည့်ပေးဖူးတဲ့အဘွားကြီးပါကွာ အခုမင်းဆွဲကြိုး ရိုက်လုလို့ ဒဏ်ရာနဲ့ နုတ်ဆက်…